विक्रमको कमाई के गर्दैछन् कमल हसन ? « Nepal Page
विक्रमको कमाई के गर्दैछन् कमल हसन ?
मुम्बई । दक्षिण भारतीय सुपरस्टार कमल हसनले आफूमा अझै पनि अभिनयको क्षमता कायमै छ भन्ने कुरा हालै रिलिज फिल्म ‘विक्रम’को सफलताबाट प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
लोकेश कनगराजको निर्देशनमा बनेको यो फिल्मले विश्वव्यापी रुपमा ३ सय करोड बढी कमाएको छ । कमल फिल्मको सफलताले खुशी छन् । उनले यो फिल्म आफ्नो प्रोडक्सन कम्पनी राज कमल फिल्मस इन्टरनेसनलको व्यानरमा निर्माण गरेका हुन् ।
फिल्मले दिनानुदिन सफलता पाइरहँदा सफलताबाट प्राप्त पैसा कमलले के गर्छन् भन्ने प्रश्नमा उनले बाेलेका छन्, ‘म आफ्नो ऋण तिर्नेछु । म मन भरेर खान्छु र आफ्ना परिवार तथा साथीहरुलाई जे दिनसक्छु त्यो दिन्छु । यति गर्दा मेरो सबै पैसा सकियो भने म भन्नेछु कि अब मसँग केही छैन । अब मलाई दोस्रो व्यक्तिलाई सहयोग गर्न तेस्रो व्यक्तिबाट सहयोगको आश गर्नु छैन । मलाई कुनै विशेष उपनाम पनि चाहिएन । मेरो इच्छा भनेकै मान्छे बन्नु हो’, कमलले भनेका छन् ।
विवादमा तानियो ‘ब्रह्मास्त्र’
काठमाडाै । बलिउड अभिनेता रणवीर कपुर र आलिया भट्ट अभिनित फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’को ट्रेलर सार्वजनिक भएसँगै
श्रीमतीको पुस्तक पढ्न किन चाँहदैनन् आयुष्मान ?
काठमाडौँ । आफ्नो नयाँ फिल्म ‘अनेक’लाई लिएर मूलधारको हिस्सा हुने अभिनेता आयुष्मान खुरानाले हालै मात्र
‘अवतार-२’को टिजरकाे २४ घण्टामा १४ करोड ८६ लाख अनलाईन भ्युज
काठमाडौं । सोमबार बेलुका रिलिज भएको जेम्स क्यामरुन निर्देशित हलिउड फिल्म ‘अवतारः द वे अफ